Dagaal ka dhacay meel u dhaw Jowhar - BBC Somali - Warar
Dagaal ka dhacay meel u dhaw Jowhar
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 4 December, 2012, 11:46 GMT 14:46 SGA
Jowhar waxa ay ka mid tahay meelaha ku haray gacanta al-Shabaab
Kooxda Islaamiga ee al-Shabaab ayaa weerar ku qaadday saldhig ay leeyihiin ciidmada dowladda Soomaaliya oo ku yaal meel u dhaw magaalada Jowhar ee Koonfurta Soomaaliya.
Guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose, Cabdi Jiinoow Calasoow ayaa BBC u sheegay in dagaalka ay ku dileen ugu yaraan 15 ka tirsan al-Shabaab.
Waxa uu qirtay in dhinacooda laga dilay saddex askari 5 kalena looga dhaawacay dagaalka.
Weriyayaasha ayaa sheegaya in dagaalku ahaa kii ugu xooggana tan iyo markii ciidanka dowladda iyo kuwa Midowga Afrika ay bilaabeen inay u dhaqaaqaan dhinaca magaalada Jowhar, oo ah mid ka mid ah meelaha weli ku haray gacanta al-Shabaab.
Isniintii al-Shabaab waxa ay gaadmo ku weerartay kolonyo baabuur ah oo marayay meel u dhaw magaalada dekedda leh ee Marka, kolonyadaasi baabuurta oo ay saarnaayeen saddex xubnood oo ka tirsan golaha wasiiradad.
Laakiin saraakiisha degaanka ayaa sheegay in afar booliis ah in lagu dhaawacay.